Taariikhda App-ka Apple TV ee Fog: Saameyntiisa Remote Remote | Waxaan ka socdaa mac
Maalmo ka hor waxaan kuu sheegnay in Apple waxay go'aansatay inay ka saarto bakhaarka arjiga mid noo ogolaaday inaan la macaamilo Apple TV, hadaanan ku dhawayn amarka. Codsi aan macno lahayn maxaa yeelay macruufka cusub ee iOS iyo iPadOS ee ka hawlgala nidaamyada durba waxaa lagu dhex daray xarunta kontoroolka. Haddii aad rabto inaad ogaato sheekada sida codsigani ku dhashay iyo saamaynta ay ku yeelatay, way fiicantahay inaad aqriso qodobka soo socda ee Twitter.
Apple TV Remote App wuxuu ahaa horudhaca Siri Remote
Injineerkii hore ee Apple iyo naqshadeeye Alan Cannistraro ayaa faah faahiyay qaabka loo abuurayo barnaamijka Apple TV Remote ee iPhone. Cannistraro ayaa qoray taas bilaabay qorida barnaamijka 2006, intaanan arkin inta kale taleefanka adeegsigiisa. Abku wuxuu ku dhammaaday inuu noqdo barnaamijkii ugu horreeyay ee wax soo saar ee "App Store team ay ku tijaabin jireen qulqulka soo gelintooda Bakhaarka."
Magaca asalka ah ee loogu talagay barnaamijka fog wuxuu ahaa iControl.
Ilaa iyo inta aan ku rarno kaliya iTunes iyo Apple TV xakamaynta, Noocdayda ayaa sidoo kale ii oggolaatay inaan shido nalalka, telefishanka iyo qalabka wax qabta (adoo adeegsanaya adabtarada infrared), oo keydso oo dib u billow xaaladda qolka "muuqaal".
Sannad kadib (2009) sidoo kale waxaan ku dhisay noocyo fog fog oo u oggolaanaya shaashadda taabashada taleefankaaga jiirkaaga u soo bixi kumbuyuutarka, iyo la falgal sawirrada, codsiyada (asalka TouchBar) iyo shaashadda kombuyuutarka ee Mac-gaaga.
Mid ka mid ah odhaahda ugu muhiimsan waa tii la sameeyay iyada oo la tixraacayo sanadkii 2010, halkaasoo la sheegay in barnaamijkani wuxuu ahaa dhiirigelinta Siri Remote.
Sannadkii 2010, waxaan la fadhiistay Steve si aan u tuso sida TV-ga Apple-ka ah ee meelaha fog laga hago u dhacayo, wuxuuna igu yidhi, "Apple TV Remote ee soo socdaa waa inuu sidan ahaadaa iyada oo aan wax shaashad ah la hayn." Waxay nagu qaadatay shan sano (waxyaabo badan ayaa istaagay markii Steve dhintay), laakiin ugu dambeyntii Siri Remote ayaa soo baxday.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Taariikhda barnaamijka Apple TV Remote App: Saameyntiisa Remote Remote